トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Refinancing kubva wokurarama chikwereti zvikwereti kadhi anogona kuva? Ndipei izvozvo?
Kunyange chemhosva kuti wokurarama mbiri ari pakati, kana ukaona munhu refinancing wemapoka zvemari masangano, unogona refinance kune zvikwereti kadhi. Zvisinei, pane caching puranga, kana magamuchira chikwereti ari kutenga puranga, nekuti parege kukwanisa refinance, ngationgorore pachine.
Uyezve, kunze mukuru zvikwereti kadhi, zviridzwa mari kuti vave anotaurwa so "chikwereti nenzvimbo" Anonziwo sechinhu chikuru kusarudza refinancing kuenda. A chikwereti nenzvimbo, kana makaita muripo vakawanda zvemari masangano, rinoreva chikwereti, zvakadai sezviya waitsanangura chemhosva kuenda kune mumwe. Nekuti iwe uri wo zvikwereti kadhi kuti vakakomborerwa yezvakaita chikwereti nenzvimbo zviripo, avo vakagamuchira mari multiple zvemari masangano, ngatitarisei nokuda kwezvikwereti dzakadaro.
refinance kana paine makodzero? Kana refinance
wokurarama chikwereti pamusoro kadhi chikwereti, pane mukana kuti akakurira chemhosva mari. Somuenzaniso, sezvo zvikwereti-kadhi kubhengi vane yakaderera kufarira prices kana zvichienzaniswa akadai nevatengi mari, zvichabatsira kuti aponese mubereko mugove. Uyezve, dzimwe masangano zvemari kuchaita kuponesa komisheni.
Zvisinei, nokuti sei mutsividzo kana mari richachinja, izvozvo zvinoenderana refinancing wemapoka zvemari masangano. Nokuda kwechikonzero ichi, zvakananga kuti vatevedzere kuchinja chemhosva mari, ngatitaurei nokungwarira kusarudza refinancing wemapoka zvemari masangano.
zvakare kuti "mutsividzo anogona kubatanidza", munoti kuti zvakanakira refinancing. Uye akagamuchira mari multiple zvemari masangano, kubvira pamwedzi akawanda ari Specification kusvika kumba, uchava zvakaoma kunzwisisa kushandisa chinzvimbo uye nokuripira ezvinhu. Saka, achishandisa chikwereti nenzvimbo, kana zvichibvira kubatanidza chemhosva, zvichava nyore kuti zvakawanda chemhosva urongwa.
[su_note note_color = "# ffffff"] _ x000D_ wokurarama chikwereti. The kadhi chikwereti kuva nzvimbo
wokurarama chikwereti mambure pamusoro peji We yokusuma vakawanda. It muzviitiko zvakawanda haana kukwanisa refinance, asi inokosha Edza mubvunzo nguva yokuva.
[/ su_note] Zvinofanira kucherechedzwa kana
refinance iri? By
refinancing wemapoka masangano zvemari, services siyana vari kuwedzera chikwereti. Somuenzaniso, mabasa akadai rutapudzo pamusoro ngaape uye chimbadzo pamusoro pfungwa kunogona kuonekwa, asi zviri kubatsira vakawanda basa nevanhu achasiyana. Naizvozvo, zvakasimba kunzwisisa basa zviri sangano zvemari nomumwe nechokwadi unosarudza kubatsira yakakura refinancing kuenda neni.
panguva, aonawo chikwereti mabasa akadai nomudonzvo zvemari masangano isu pamwe mazano chemhosva urongwa rakawedzerwa. Kana uchinzwa mwoyo mune remangwana mutsividzo, zvikwereti zvakadaro funga somumwe zvisarudzo.
Uyewo, zviri muchidimbu yenyu, refinancing chete chikwereti, chete haugoni kwereta kazhinji chitsama pachiyero mari uchida kubhadhara. Kana iwe uri zvichida kugamuchira chikwereti itsva, zvakakosha kusarudza chikwereti kuti inotsigirwa okuwedzera. Aonawo chikwereti mabasa akadai akawedzerwa. Kana uchinzwa mwoyo mune remangwana mutsividzo, zvikwereti zvakadaro funga somumwe zvisarudzo.
Also, muna pfupiso dzenyu, refinancing chete chikwereti, chete haugoni kwereta kazhinji chitsama pachiyero mari uchida kubhadhara. Kana iwe uri zvichida kugamuchira chikwereti itsva, zvakakosha kusarudza chikwereti kuti inotsigirwa okuwedzera.